२०२० मा डाबर रेडको कारोबार १००० करोड - सिम्रिक खबर
२०२० मा डाबर रेडको कारोबार १००० करोड
२००१ मा डाबर ब्रान्डलाई यसको प्रतिस्पर्धीहरूले यसलाई कसरी जीवित राख्छन् भन्ने बारेमा उचित चेतावनी दिइएको थियो। त्यतिखेर कम्पनीले टुथपेस्ट सेगमेंटमा प्रवेश गरेको थिएन तर यसको विकल्पहरू मात्र तोकेको थियो। टूथपेस्ट पाउडर चाँडै एक रोक्न आउँदै थियो, र कम्पनी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नको लागी, यो “कोलगेट’ को बिरूद्ध जानु पर्ने थियो। कम्पनी पहिले नै एक समर्पित प्रशंसक बेस भएकोले, यो सिर्फ एक नयाँ प्रस्ताव संग तिनीहरूलाई लक्षित गरिएको थियो।
अर्को २ बर्षमा, निश्चित रूपमा यो ग्राहकको साथ सन्देशमा आएको थियो – ‘तपाईंको पाउडर अब पेस्को रूपमा आउँछ’ र ग्राहकहरू निश्चित रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न उत्सुक थिए। झन्डै दुई दशक पछि, २०२० मा डाबरको कारोबार रु १००० करोड भएको छ।
डाबर रेडको ग्राहक को हो?
डाबर रेडको दक्षिण भारतमा एक ठूलो नाम भएको छ र बिस्तारै देशको उत्तर र पूर्वी क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। बिहार र आंध्र प्रदेश जस्ता राज्यहरूमा ब्राण्ड पहिलो स्थानमा छ। टुथपेस्ट क्षेत्र २।१५ ले बृद्धि भइरहेको छ भने महामारीको अवस्थाको शुरुमा पनि यो बृद्धि भएको थियो तर डाबरले ड।१५ बाहिर ल्यायो।
डाबर पतंजलि दन्त काटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, तर यसको सस्तो मूल्य बिन्दुको साथ श्रोतालाई वाह गर्न सफल भएको छ। १०० ग्राम ट्यूबको मूल्य रु ५० पुनस् खरीद रणनीतिले निश्चित रूपमा ब्रान्डलाई राम्रोसँग राख्दछ। पहिलो पटकका खरीददारहरूले अरू केहि छनौट गर्दैनन्, र दुई वा तीन पटक सम्म दोहोरिएको खरीदले ब्रान्डलाई उचाइमा राख्यो।
डाबर रेडको भविष्य रणनीति के हो?
डाबर रेड जेल प्रदान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छ जुन स्वस्थ मौखिक स्वच्छतामा मद्दत गर्दछ। आजको दिनसम्म, यसले ताजापन र मूल्य निर्धारणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ तर अब मौखिक मुद्दाहरू समाधान गर्दै प्याकेजिङ् र जेल प्रतिस्थापित गर्नेछ । तिनीहरू रंग रातो ‘रातो’ मा ध्यान दिन गइरहेका छन् र भनाइहरुमा जाँदा, ‘भविष्यलाई मार्केटिंग रणनीतिमा शहरलाई रातो रंग।